तपाईंको घर बनाइएको अनौठो घर मार्केटिङ सेवाहरू डिजाइन गरिएका छन्
एक अद्वितीय घर सूचीबद्ध गर्नुहोस्!
हाम्रो अनौठो घर विपणन तपाईंको घरको स्थिति बनाउनेछ! यदि तपाईं OWN A UNIQUE HOME, आफैँलाई पक्का लुक्की!
खरीददारलाई आकर्षित गर्न तपाईंको सम्पत्तिको अद्वितीयता प्रयोग गर्नुहोस्। हाम्रो अद्वितीय गृह मार्केटिङ सेवाहरू तपाईंको सम्पत्तिलाई भीडबाट बाहिर खडा गर्न र तपाईंलाई थाहा पाउनु डिजाइन गरिएको छ ... र तपाईले बेचेको छु!
Brenda Thompson, अद्वितीय होम मार्केटिंग विशेषज्ञ
हरेक घर मैले स्वामित्व पाएको छु हजसन नदीमा एक ढुङ्गा गेटहाउस बाट अनन्य रहेको छ न्यूयोर्क उत्तरी क्यारोलिना मा पर्खालहरुमा एम्बेडेड रंगीन बोतलों संग एक पोस्ट र बीम घर को लागि। एक खरीदारको रूपमा मेरो व्यक्तिगत अनुभव र त्यसपछि बिक्रेताले 1995 मा विशेष "फेला पार्ने ..." को उद्घाटन गर्ने विचारलाई रोकेको थियो।
तपाई जस्तै, मैले धेरै अद्वितीय गुणहरू स्वामित्व गरेका छु। जब म तिनीहरूलाई बेच्न तयार थिएँ, मैले पत्ता लगाए कि पारंपरिक रियल स्टेट फर्म्स र उनको एजेन्टले आधारभूत मार्केटिङ कुशलताहरू पाएनन्। तिनीहरूसँग कुनै ज्ञान थिएनन् कसरी एक अनोखी घर बेच्न वा बेचेको एक अद्वितीय सम्पत्ति कसरी प्राप्त गर्ने। त्यसैले, मैले मेरो वर्षको मार्केटिंग विशेषज्ञतालाई न्यूयर्क स्टक एक्सचेंजको मार्केटिङको निदेशकको रूपमा प्राप्त गरेको छु, रियल स्टेट उद्योगमा अनावश्यक अंतर भर्ना गर्न रियल स्टेटस लाइसेन्ससँग यो संयुक्त र आवाज छ! विशेष "फेला पर्यो ..." जन्म भएको थियो!
म तपाईंलाई आफ्नो अनौठो सम्पत्ति बेच्न मद्दत गर्न चाहन्छु। तपाईले एक विशेष "खोज्नुहोस् ..." को स्वामित्व लिनु भएको छ र यसलाई बिक्रि प्राप्त गर्न एक व्यावसायिक मार्केटिंग अभियान चाहिन्छ। यसले साँचो रचनात्मकता र अद्वितीय घर बेच्ने व्यापक एक्सपोजर लिन्छ। विशेष "फेला पर्यो ..." एक अचल सम्पत्ति कम्पनी हो, तर त्यसभन्दा बढी हामी पेशेवर बजारमा छौं - केवल स्थानीय एमएलएसमा विज्ञापन राखेर बाहिर जान्छौं।
कुकि-कटर घरको समुद्रमा तपाईंको अनूठे घर मार्केटिङ एक निश्चित तरिकाले कुनै ध्यान पाउन सक्दैन। ग्राहकहरूको पारंपरिक विधिहरू प्रयोग गरेर तपाईंको अनूठे घरलाई सूचना दिँदै उनीहरूलाई ह्यास्टस्ट्याकमा सुई नोटिस गर्न सोध्छन्। तपाईंको विशेष घर मार्केट गर्न र तपाईंको जस्तै जस्तै एक अनोखी सम्पत्ति खोज्ने को आकर्षित गर्न एक विशेष दृष्टिकोण लिन्छ। हाम्रो अद्वितीय घर मार्केटिंग सेवाले तपाईंलाई आफ्नो सम्पत्ति को विज्ञापन गर्न को लागी सही खरीदारहरुलाई आकर्षित गर्न को लागी तपाईंको मूल्य को भुगतान गर्न मा मदद गर्न सक्छ।
हामी व्यक्तिगत अनौठो अभियानहरूको लागि हाम्रो अनौठो सम्पत्ति सूचीको लागि डिजाइन गर्दछौं। तपाईंको अभियानले धेरै चरणहरू समावेश गर्दछ। पहिलो, हामी सबै भन्दा अधिक सम्भावित खरीदारको पहिचान गर्छौं, त्यसपछि खरीददारलाई निर्देशन दिईएको सम्पत्तिको लागि एक नाम सिर्जना गर्नुहोस्, खरीदारलाई आकर्षित गर्न एक सम्भावित "सम्पत्ति कथा" शिल्प र त्यसपछि आफ्नो सम्पदा राष्ट्रीय र विश्व भर मा विज्ञापित गर्नुहोस्.
"सम्पत्ति कथा" हाम्रो ट्रेडमार्क दृष्टिकोणको एक मात्र हो। यो व्यापक रूपमा सफल छ। तपाइँको अनुकूलित तयार सम्पत्ति सम्पत्तिले तपाईंको अनैतिक सम्पत्तिलाई जीवनमा ल्याउनेछ। खरीददारहरूले "महसुस" सक्षम हुने छन् कि यो तपाईंको घरमा र तपाईंको मैदानमा बाँच्ने जस्तो हो। तिनीहरू जहाँ पनि उनीहरु बाट आफ्नो सम्पत्ती को माध्यम ले "भावनात्मक रूप देखि स्थानांतरित" हुनेछ।
त्यसपछि हामी आफ्नो सम्पत्ति - न्यूयर्क टाइम्स, वाल स्ट्रीट जर्नल, रोब रिपोर्ट, डप्पन्ट रेजस्ट्री, हवेनिन ग्लोबल, अन्तर्राष्ट्रिय हील्ड र एक्सएनएनएक्स अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल वेबसाइट भन्दा बढीमा आफ्नो सम्पत्तीको बारेमा विज्ञापन प्रदान गर्दछौं।
विशेष "भेटिन्छ ..." मा, हामी मार्केटिंग प्रोफेसरहरू हो, त्यसपछि Realtors®। हामी पूर्ण रूपमा अनौठो अचल सम्पत्तिको मार्केटमा ध्यान केन्द्रित गर्दछौं। हामी असामान्य घरहरूको लागि विज्ञापन एजेन्सी हो। हामीलाई तपाईंको अनोखी घर बेच्न मद्दत पुर्याउनुहोस्।
मैले शब्द फैलाउन र आफ्नो सम्पत्ति प्राप्त गर्न र यसलाई बेचेको छुट्टाछुट्टै घर मार्केटिंग सेवाको प्याकेज डिजाइन गरेको छु!
के हाम्रो अनौठो होम मार्केटिंग तपाईंको लागि सही छ? - मलाई ईमेल गर्नुहोस्! brenda@sp विशेषfinds.com
हामी तपाईंको "सम्पत्ति कथा" शिल्प गर्छौं।
एक घर खरिद एक अत्यधिक भावुक र धेरै व्यक्तिगत निर्णय हो। हामी एक "खरीदारको भावनाहरू" अपील गर्न तपाईँको "सम्पत्ति कथा" रचना गर्नेछौं।
खरीददारहरूले "महसुस" गर्न सक्नेछन् जुन तपाईंको घरमा र तपाईंको मैदानमा बाँच्न मनपर्छ। तिनीहरू "आफ्नो भावनाको माध्यमबाट भावनात्मक रूपमा हस्तान्तरण" हुनेछन्।
"विश्व-कक्षा अनलाईन प्रकाशनमा विश्व-क्लास विज्ञापन"
तपाईंको अनूठा गृह विपणन अभियान समावेश हुनेछ धेरै अधिक यसलाई मात्र एमएलएसमा राख्नुहोस्। तपाईंको सूचीको सम्पूर्ण लम्बाइको लागि, तपाईंको सम्पत्तिलाई न्यूयर्क टाइम्स, वाल स्ट्रीट जर्नल, रोब रिपोर्ट, हवेनिस ग्लोबल र डुपन्ट रजिस्ट्रीमा प्रस्तुत गरिएको छ। *
"विदेशी खरिदहरूमा तपाईंको सम्पत्ति बेवास्ता गर्नुहोस्"
विदेशी खरीददारहरूले 153 डलरमा 2017 मा अमेरिकामा आवासीय गुणहरूमा बिताए। हामी विदेशी खरिदहरू गम्भीर रूपमा लिन्छौं। तपाईंको अनोखी होम मार्केटिङ अभियान चीन, सउदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, रूस, जर्मनी र थप मा 120 अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञापन प्लेसमेंट संग वैश्विक दर्शकहरु सम्म पुग्छ। अझै सिक…
हाम्रो सुन्दर वेबसाइटमा "घरको अद्वितीय घर खरीददारहरूको सामने" तपाईंको घर राख्नुहोस्
तपाईंको असामान्य सम्पत्तिको उत्कृष्ट पक्षहरू र अद्वितीय विशेषताहरू प्रकट गर्नुहोस्। अद्वितीय गृह खरीदारहरूको हाम्रो ग्लोबल निम्न तपाईंको घर हेर्नको लागी छ।
तपाईंको विशेष खोजी समान प्रकारका घरहरूको कोटीमा राखिने छ जुन यसलाई खरीददारहरूको लागि सजिलो बनाइनेछ।
तपाईंको आफ्नै "ई-पुस्तिका"
तपाइँको आफ्नै मिडिया ई-ब्रोशरसँग खरिदहरू संलग्न गर्नुहोस्। तपाईंको सम्पत्ति स्टोरीको साथ पूरा गर्नुहोस्, तपाईंको इ-म्यागजिन विश्वको हरेक कुनामा सक्रिय पाठकहरूसँग तिनीहरूको कम्प्युटर र साथै कुनै पनि मोबाइल यन्त्रबाट तुरुन्तै उपलब्ध हुन्छ।
"मास मिडिया अभियान"
तपाईंको सम्पत्तिलाई सक्रिय रूपमा फेसबुक र यूट्यूब सहित सामाजिक सञ्जाल साइटहरूमा गृह शिकारीहरूको सामने राख्नुहोस्। तपाईंको अनूठा गृह मार्केटिङ अभियानले एक सुन्दर स्कुल एचभि भिडियो टुरमा एक सुन्दर Google धरती एरियल भिडियो फ्लाई-ओभर साथै साथसाथै एक सुन्दर फेसबुक भिडियो पृष्ठमा समावेश गर्दछ जुन तपाईंको सम्पत्ती बेचेको हो।
हाम्रो "छवि प्रभाव" संग एक राम्रो प्रभाव बनाउनुहोस्। तपाईंको सम्पत्तिलाई खरिदकर्ताले हेर्ने तरिका हेर्नुहोस्। हामी तपाईंको फोटोहरूको समीक्षा गर्नेछौं र तपाईंको सम्पत्तीको छवि सुधार गर्नका लागि सुझाव दिन्छौं तपाईंको अनलाइन उपस्थिति र कार्यक्रमका लागि।
तपाईंको सम्पत्तिलाई SpecialFinds.com मा थप्नुहोस्
प्रति महिना केवल $ 14.00!
स्व-सूची मेरो सम्पत्ति
* हाम्रो अनुकूलन मार्केटिङ कार्यक्रमका केही तत्वहरूले $ 500,000 भन्दा बढी मूल्यहरूको गुणहरूमा विभिन्न प्रकाशन सीमा समावेश गर्न सक्दैनन्।
हाम्रो साथ टचमा प्राप्त गर्नको लागि सुरू गर्न पाउनुहोस्
सजिलो अनलाइन सम्पर्क फारम
यो जीवित बनाउनको लागि एउटा घर वर्णन गर्नुहोस्!